I-Glucometer: Imigomo yokusebenza, izinhlobo, indlela yokusebenzisa nokuthi ungayithenga kuphi? > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Ama-Glucometer: umgomo wokusebenza, izinhlobo, ukwakheka, indlela yokusebenzisa
Nquma ukuguquka kombala kwendawo yokuhlola, okuvela ekuphenduleni kwe-glucose enezinto ezikhethekile ezifakwe emugqeni. Lawa abizwa ngokuthi “Amadivayisi wesizukulwane sokuqala”, ubuchwepheshe babo obuphelelwe yisikhathi. Qaphela ukuthi lawo madivaysi akalwa ngegazi eliphelele le-capillary.
Hlela i-Electrochemical glucometer |
Uma emashumini ambalwa eminyaka edlule, ukugcwala kweglucose egazini bekungalinganiswa kuphela emtholampilo, namuhla ama-glucometer anamuhla akuvumela ukuba wazi izinga le-glucose ngokushesha nangaphandle kokuvakashela i-laboratory. Umgomo wokusebenza kwensiza ukufaka iconsi legazi le-capillary engxenyeni ekhethekile yedivayisi, lapho, ngaphansi kwethonya lamakhemikhali amakhemikhali, ukusabela kwenzeka okubonisa inani loshukela egazini lesiguli. Kuthatha kuphela imizuzwana embalwa ukuqeda isilinganiso.
Izakhi ezisemqoka zedivayisi yilezi:
isikhafu esizenzakalelayo - esifanekiselwa yinsimbi yokwenza ukubhoboza,
amayunithi we-elekthronikhi - ahlome nge-LCD ukubonisa umphumela wokuhlola,
amabhethri anakho ukwenziwa kabusha - qinisekisa ukusebenza kwensiza,
imivimbo yokuhlola - ingxenye yokusebenza yedivayisi okwenzeka ngayo ukusabela kwamakhemikhali.
Ukwahlukaniswa kwamadivayisi kuncike kumgomo wokusebenza kwawo. Ezinye izinhlobo zama-glucometer yilezi:
I-photometric - basebenzisa ukusabela kwegazi nge-reagent, futhi umphumela ulinganiselwa ngokuqina komthunzi,
i-optical - bahlaziya umbala wegazi futhi banqume ukuqoqwa kwama-carbohydrate,
I-photochemical - umsebenzi ususelwa ekuphenduleni kwegazi nge-ejenti yamakhemikhali,
i-electrochemical - sebenzisa izifiso zikagesi lapho uxhumana nemivimbo yokuhlola.
Ungayisebenzisa kanjani imitha
Sebenzisa i-glucometer kusho i-algorithm elula neqondakalayo engenziwa ekhaya:
endaweni efinyelelekayo zonke izinto ezidingekayo kuhlolo,
izandla kufanele zigezwe futhi zomiswe,
ngejubane legazi kuma-capillaries, udinga ukuxhawula isandla sakho kaningana,
umucu wokuhlola kufanele ufakwe emgodini okhethwe insimbi kuze kuzwakale ukuqhafaza okuthile,
kugxotshwa umunwe endaweni yepedi,
izilinganiso zenziwa ngokuzenzakalelayo. Ngemuva kokuthi imiphumela ikhishwe, umucu wokuhlola ususwa kusuka kwizixhobo bese ulahlwa.
Isikhathi sokukhipha imiphumela sinokwehluka kusuka kumasekhondi angama-5 kuye kwangama-45, kuya ngohlobo lwemitha esetshenzisiwe.
Incazelo yemichilo yokuhlola yemitha
Imivimbo yokuhlolwa kwe-gluceter ye-http: //satellit-tsc.ru imelelwa ngamapuleti angunxantathu aboshwe ngomshini okhethekile wamakhemikhali. Masinyane ngaphambi kokulinganisa ukugcwala koshukela egazini, kufanele ufake umucu wokuvivinya ku-slot ekhethiwe kudivayisi.
Lapho igazi le-capillary lingena emgqeni wokuhlola, amakhemikhali asetshenziselwa ukufaka ngaphakathi ungqimba wepulethi asabela ngalo. Ezimweni eziningi, i-glucooxidase reagent isetshenziselwa ukwenza isivivinyo. Ngokuya ngoshukela omningi, uhlobo lokuhamba kwamangqamuzana egazi luyashintsha, oluqoshwa kusetshenziswa i-bioanalyzer.
Lo mgomo wokusebenza kwemichilo yokuhlola uhlobene nama-glucometer ohlobo lwe-electrochemical. Ngokusekelwe kudatha etholakele, idivaysi ibala izinga cishe loshukela egazini noma ku-plasma yesifo sikashukela. Isikhathi sokuhlola imiphumela singathatha imizuzwana emi-5 kuye kwengama-45. Amadivaysi anamuhla asebenza ngamazinga amaningi kashukela: ukusuka ku-0 kuye ku-55,5 mmol / L. Le ndlela esheshayo yokuxilonga ilungele zonke iziguli ngaphandle kwezingane ezisanda kuzalwa.
Izimo ezikhethekile zokuhlolwa ushukela
Ngaphandle kokusebenza kahle kwezobuchwepheshe kwemichilo yokuhlola, noma iyiphi idivaysi enembile kakhulu ngeke ikwazi ukunikeza umphumela wenhloso uma:
igazi lingcolile noma libunjiwe
igazi noma i-serum iyadingeka ekuhlolweni,
izinga le-hematoctitis ebangeni lisuka ku-20 liye ku-55%,
I-Oncology noma izifo zesifo esithathelwanayo sekutholakele.
Kwezinye izimo, ukubheka kanye nokunemba kwemiphumela yokuhlolwa ushukela wegazi kuya ngempilo yeshalofu yemichilo esetshenzisiwe yokuhlola.
Ifomu lokukhulula imivimbo
Imichilo yokuhlola ye-glucometer iyatholakala ekufakweni ngakunye. Ukupakisha kungahluka ngokuya ngomenzi. Izinkampani ezikhiqiza imichilo yokuhlola zihambisana namazinga namazwe omhlaba ekukhiqizweni kwezingxenye zama-glucometer. Isikhathi esincane esidingekayo ukucubungula ukwehla kwegazi le-capillary yimizuzwana emi-5.
Lapho ukhetha ukufakwa kwemichilo yokuhlola ye-glucometer, kuyadingeka ukuthi ubheke isikhathi nokuvama kokuwusebenzisa. Uma ukuqina kokudliwayo kuphuliwe, lapho-ke kufanelekile ukusetshenziswa izinyanga eziyisithupha.
Intengo yemichilo yokuhlola incike kuhlobo, imodeli nomenzi wemitha, kanye nenani lamayunithi kwiphakeji eyodwa. Ngokuhlolwa okujwayelekile kwamazinga kashukela wegazi, kuyindlela enhle ukuthenga iphakethe elikhulu, eligcina ezindlekweni zephiko ngalinye. Uma imichilo yokuhlola yohlobo olufanayo nohlobo lweglucometer, khona-ke imikhiqizo yesizukulwane esisha iyahambelana amamodeli akhishwe ekuqaleni.
I-Glucometer: Imigomo yokusebenza, izinhlobo, indlela yokusebenzisa nokuthi ungayithenga kuphi?
I-glucometer iyithuluzi elakhelwe ukunquma inani le-glucose ku-plasma yegazi. Idivaysi iyadingeka ukuthola nokuqapha isimo samanje se-carbohydrate metabolism kubantu abanesifo sikashukela. Ngokusekelwe kwimininingwane etholakala kusetshenziswa i-glucometer, iziguli zithatha izinyathelo zokubuyisa imithambo ye-carbohydrate metabolised. Kunezinhlobo eziningi zale divayisi, futhi, ngezindlela eziningi zokulinganisa amazinga kashukela egazini.
I-endocrinologists yanamuhla incoma ukuthi zonke iziguli ezinenkinga yokulimazeka kanzima kwe-metabolic zisebenzisa imitha njalo.
Amamitha weshukela egazi namuhla: inhloso nomgomo wokusebenza
Emashumi eminyaka edlule, amazinga kashukela awalinganiswa kuphela ngaphansi kwezimo zomtholampilo. Muva nje, ama-glucometer aphathekayo wokuhlonza isimo se-carbohydrate metabolism ekhaya athola cishe ukusatshalaliswa komhlaba wonke.
Abasebenzisi bale divayisi badinga ukufaka igazi le-capillary kuphela epuletini yenkomba elifakwe kulolo cingo bese ngokoqobo kumasekhondi ambalwa ukuhlangana koshukela egazini kuzokwaziwa.
Kodwa-ke, isilinganiso se-glycemia esigulini ngasinye siyinzuzo yomuntu ngamunye, ngakho-ke, ngaphambi kokulinganiswa noma ngaphambi kokuthenga idivaysi, ukubonisana okuphoqelekile nochwepheshe kuyadingeka.
Amadivayisi wanamuhla wokunquma izinga le-glycemia, noma ebukeka eyinkimbinkimbi, empeleni alula ukusebenza, ikakhulukazi ngemuva kokufunda ngokucophelela imiyalo.
Ngabe i-glucometer iqukethe ini?
Iglasscometer yakudala iqukethe:
Izicishamlilo ezenzakalelayo - ukubhoboza iminwe,
Iyunithi ye-elekthronikhi ene-liquid crystal show,
Amabhethri angaphinde akhokhelwe,
Imichilo yokuhlola (ehlukile kumodeli ethile ethile).
Ngokungeziwe, imitha ayisetshenziswa njengethuluzi elizimele, kepha njengengxenye yekithi yokuzihlola ngokwakho kweziguli ezinesifo sikashukela. Ikhithi yokuxilonga neyokulapha ibizwa ngokuthi yiphampu ye-insulin, ngaphezu kwe-glucometer, ifaka nezizibaya zesirinji zokuphathwa kwe-insulin kanye ne-insulin cartridgeges.
Ngabe isebenza kanjani imitha?
Abantu abaningi banesifiso sokuthi isebenza kanjani i-glucometer, nokuthi ungalinganisa kanjani amazinga kashukela. Ngakho-ke, njengoba kushiwo ngenhla, kunemigomo emibili yokwenza. Omunye wabo ubizwa ngokuthi i-photometric, owesibili - u-elekthronikhi.
Ngakho-ke, inketho yokuqala isebenza kanjena. Ngokusebenzisana kwe-glucose yegazi kanye ne-reagent ekhethekile ezosetshenziswa kumucu wokuhlola, amabala okugcina aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngakho-ke ubukhulu besithunzi kuncike ekuhlaselweni koshukela. Uhlelo lwe-Optical lwedivaysi yenza ukucubungula kombala futhi lunquma izinga kashukela kusuka kule mininingwane. Kuliqiniso, le divayisi inezithiyo zayo. Kuyintekenteke kakhulu futhi kudinga ukunakekelwa okukhethekile, futhi imiphumela etholakele inephutha elikhulu.
Idivayisi elandelayo i-elekthronikhi. Kulokhu, i-glucose ixhumana nomucu wokuhlola, okuphumela kugesi omncane wamandla. Idivaysi yona, ilungisa leli xabiso futhi inquma ileveli kashukela. Kulokhu, imiphumela ingabhekwa njengelinembe ngokwengeziwe.
Imitha yeglucose enembile
Iziphi izidingo okufanele imitha ye-glucose enembile ihlangabezane nazo? Okokuqala, le ncazelo ibhekisela ekuqinisekeni kwemiphumela. Lapho uthenga idivaysi, umthengisi kufanele abonise ukuthi ilunge kangakanani idivaysi.
Ukuze wenze lokhu kuhlolwa, kufanele ulinganise izinga le-glucose ngqo esitolo. Ngaphezu kwalokho, ngokunemba kwemiphumela, kufanelekile ukwenza lokhu izikhathi ezi-3. Imininingwane etholakele akufanele yehluke komunye nomunye ngaphezulu kwama-5-10%. Ngaphandle kwalokho, ucingo alukwazi ukubizwa ngokuthi olunembile.
Ungenza ukuhlaziya elabhorethri bese uya ukuhlola amadivaysi ngomphumela. Iphutha elivumelekile le-glucometer lingabi ngaphezu kwe-0.8 mmol / L. Ngaphandle kwalokho, ukutholwa kwemodeli ethile kufanele kulahlwe. Ukuphambuka okuvumelekile kungungu-20% kuphela futhi kungabe kusaba khona.
Ngamazwi, amadivaysi amaningi anembile, kepha ingabe kunjalo? Ngakho-ke, kunzima ukwahlukanisa amadivayisi we-ultraprecise kubo. Udinga ukuzivivinya ngokwakho. Kulokhu, kuzovela ukuthi kuthengwe insiza enhle ngempela.
Ukuhlukaniswa. Iziphi izinhlobo zamamitha kashukela egazi akhona?
Kunezindlela eziningi zokuthola inkomba ye-glycemic:
Indlela ye-Spectrometric (engahlaseli).
Ngokuhambisana nezindlela, kunezinhlobo eziningi zama-glucometer.
Kukhona inguqulo ethuthukisiwe yendlela yokulinganisa ye-electrochemical - i-coulometry. Umgomo wale nqubo wokulinganisa inani eliphelele le-elekhtronikhi ekhishwe ngesikhathi senqubo yokuxilonga. Izinzuzo ze-coulometry ziyisidingo senani legazi elincane. Optical biosensor
Amaswidi kwabanesifo sikashukela. Bheka izindlela zokupheka zekhukhi ezinoshukela ezikulesi sihloko.
Ingabe abanesifo sikashukela bangawadla ubhontshisi? Uhlobo luni lukabhontshisi olukhethwayo futhi ngani?
Kuyini ukunemba kwama-glucometer nokuthi ungakuqinisekisa kanjani ngokuzimela? Lesi sikhombisi sisho ubuqiniso bomphumela lapho kunqunywa izinga le-glucose egazini.
Ukubheka ukunemba kwensiza, kufanelekile ukusebenzisa indlela ethile yokusebenzisa eminye imithetho. Udinga ukuqala ukuhlola idivaysi ngqo esitolo. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha igazi okungenani amahlandla ama-3 bese uqhathanisa imiphumela nomunye. Ukuphambuka okuphezulu akufanele kudlule i-5-10%.
Kunconywa ukuba wenze isivivinyo sikashukela elabhorethri bese uya kudivayisi nedatha etholakele. Ngokuvamile, imiphumela akufanele yehluke ngo-20%.
Ukunemba kwemitha kuyindlela ebaluleke kakhulu. Ngemuva kwakho konke, uma umphumela ungathembekile, umuntu angaphuthelwa isikhathi lapho edinga khona ukufaka i-insulin. Lokhu kungaholela ezinkingeni eziningi. Ngakho-ke, amahlaya anale nkomba amabi. Lapho ukhetha idivaysi, kufanele uqiniseke ukuthi ukunemba kwayo akuphambuki ngamaphesenti angaphezu kwama-20.
Ihlola amamitha kashukela egazi
Ahlolwa kanjani ama-glucometer? Le nqubo yenziwa ngqo esitolo uqobo. Udinga ukuthatha idivaysi bese uhlola izinga le-glucose. Ukuhlolwa kwenziwa cishe amahlandla ama-3, bese idatha etholakele iqhathaniswa nomunye.
Uma iphutha lingadluli ku-5-10%, khona-ke ungayikhetha ngokuphepha ithuluzi elinjalo. Uzobonisa umphumela othembekile futhi angeke ehluleke esimweni esinzima. Le nqubo ibizwa ngokuthi ukuhlolwa ngokunemba. Mhlawumbe lena ukuphela kwendlela yokuhlola ucingo.
Ngokwemvelo, udinga ukubheka ukusebenza kwangaphandle kwensiza. Masinyane esitolo kufanelekile ukukhetha imisebenzi esemqoka, setha isikhathi, usuku bese ubone ukuthi idivaysi ikwenza kanjani konke lokhu. Uma kukhona ukubambezeleka noma ukushiyeka, khona-ke kufanelekile ukuthi uqhubeke ucabangele enye ithuluzi. Ngemuva kwakho konke lokhu, ngokusobala akusebenzi futhi ngokuzayo kungenzeka kungaphenduli ekwandeni okubukhali noma ukwehla kwezinga loshukela.
Udinga ukunaka izakhi. Imichilo yokuhlola akufanele iphelelwe yisikhathi. Ngaphezu kwalokho, zigcinwa kuphela kumaphakeji athile. Leli qiniso likufanele futhi ukuthi ulicabangele. Uma konke kuhamba kahle, ungathenga insiza ngokuphephile.
IGlucometer yabantu asebekhulile
Ithembekile futhi kulula ukuyisebenzisa, yilokhu i-glucometer yabantu asebekhulile okufanele ibe yikho. Isinyathelo sokuqala ukubheka icala uqobo. Akufanele kube ngaphezu kwezinkinobho namanye amaqhinga. Ukusebenza nedivaysi kulula futhi kulula, yilokho okudingayo.
Ngaphezu kwalokho, kufanelekile ukunaka ukuntuleka kokubhalwa kwekhodi. Akulula kangako kubantu asebekhulile ukubhekana nakho konke okusha. Umuntu udinga nje umphumela osheshayo ngaphandle kwesenzo esiningi. Kubalulekile ukuthi isikrini sikhulu futhi sikhanyise ngokuzenzakalela. Ngoba izinombolo azihlali kulula ukubona.
Ubuncane bemisebenzi, ukusetshenziswa okulula nomphumela oqondile, le ndlela kufanele ibe yidivayisi. Umjikelezo we-TC ulungele le ncazelo. Mhlawumbe lokhu kungenye yamadivayisi kuphela lapho kungekho khodi. Ukuzisebenzisa kulula. Udinga ukuletha umunwe kudivayisi, futhi yona ngokwayo izothatha inani elifanele legazi. Umphumela uzotholakala ngemizuzwana eyi-7. I-Ascensia Entrust inomphumela ofanayo. Inikeza imiphumela esheshayo futhi inemisebenzi yonke edingekayo. Idivayisi kufanele kube lula ukuyisebenzisa nokuhlola ngokunembile.
Ukukhetha i-glucometer yezingane akunzima kangako. Kubalulekile ukuthi kulula ukuyisebenzisa futhi umphumela uqonde. Ngokwemvelo, kungcono ukunikeza ukukhetha kumamodeli acwebile nomsebenzi wokugcina imiphumela yakamuva.
Kukhona amadivayisi lapho ungabeka khona izindlela ezi-4 zezimpawu zomsindo. Lokhu ngeke kugweme ukwehla okubukhali noma ukwanda ushukela kuphela, kepha futhi kuxwayise ingane ukuthi sekuyisikhathi sokwenza isivivinyo. Kuyinto elula kakhulu futhi efanele.
Idivaysi enhle yiBayer Didched. Ihlangabezana nayo yonke imisebenzi emenyeziwe. Idivayisi ikhumbula imiphumela yakamuva, ikuvumela ukubala isilinganiso se-glucose esezingeni lezinsuku eziyi-14.
Idivayisi inesibonisi esikhulu, azikho izinkinobho ezingeziwe nokuningi. Lokhu kuyimodeli efanele ingane. Okuthakazelisa kakhulu akuyona nje insiza yokulinganisa amazinga kashukela, kodwa futhi ne-console yomdlalo wonke. Ngakho-ke, ingane ukuyisebenzisa kuzoba mnandi kakhulu. Futhi uthathe nayo. Ngoba awukwazi ukubona ukuthi yonke le yisixhobo sokulinganisa ushukela, ithoyizi elijwayelekile futhi akukho okunye.
Kukhona nemitha ekhethekile yezilwane. Ngemuva kwakho konke, abafowethu abancane nabo bahlushwa isifo sikashukela. Konke kwenzeka kubo njengokumuntu. Kuyadingeka njalo ukuqapha amazinga kashukela egazini. Ukuze ungasiphathi isilwane siye emtholampilo wezilwane, kwanele ukwenza isivivinyo ekhaya.
IGluco Calea ngumshini owenzelwe ngokukhethekile abafowethu abancane. Kusetshenziswa insiza kulula kakhulu, akufani nokwabantu.Udinga nje ukubhoboza isikhumba sesilwane, futhi noma kuphi futhi ulethe ithonsi legazi emgqeni wokuhlola. Ngemuva kwemizuzwana emi-5, umphumela uzotholakala.
Ukucaciswa kujwayelekile. Ikuvumela ukuthi uthole inani eliphakathi kwamaviki ama-2. Ukunemba kusezingeni eliphakeme. Idivaysi iyazenzakalela ngokugcwele, icisha ngokuzenzakalela bese iyazilungiselela. Kungenzeka ugcine idatha yakamuva.
Manje izilwane zizokwazi "ukuqapha" izinga leshukela, ngokwemvelo, ngosizo lomnikazi wazo. Ungathenga idivaysi enjalo esitolo semishini yezokwelapha noma i-oda ku-Intanethi.
Imitha kashukela wegazi
Intuthuko ekhethekile i-glucometer yezimpumputhe. Ngemuva kwakho konke, akubona bonke abantu abangakwazi ukulawula abakwenzayo. Kwakungenxa yamacala anjalo lapho amadivayisi anokulawulwa kwezwi athuthukiswa.
Ukuzisebenzisa kulula kakhulu. Idivayisi ikutshela ngokwayo ukuthi yini okufanele uyenze futhi ulalele imiyalo yomsebenzisi. Ngemuva kwenqubo, idivayisi imemezela umphumela. Imodeli enhle kunazo zonke iClover Check TD-4227A.
Le divayisi yenzelwe ngokukhethekile abantu abanombono ophansi. Ukusebenza ngedivaysi enjalo kuyajabulisa. Yena ngokwakhe usho okufanele ukwenze bese ubika ngokushesha umphumela. Akudingi ukusetshenziswa kwemichilo yokuhlola. Ngokuqondile, sebakhelwe ngaphakathi kudivayisi, lokhu kusiza umsebenzi ngayo kaningana.
Idivayisi inembile, ngakho-ke akukho kungabaza kwidatha etholakele. Ngaphezu kwalokho, inomsebenzi wokukhumbula imiphumela yakamuva futhi ungayiveza kalula. Angakwazi ukubala isilinganiso sikashukela ngaphezulu kwamasonto amabili. Ngokuvamile, le divayisi ayinabo amaphutha.
Ama-Glucometer alungiswa kuphela ezikhungweni zensiza. Awukwazi ukwenza lutho ngokwakho. Yize kungenjalo, kungenzeka uma ucingo luphela kumabhethri futhi luphele luphele. Kulokhu, vele uthenge okusha bese uzifaka kudivayisi. Manje sekumi ngomumo ukusebenza ngamandla egcwele.
Kepha kuthiwani uma umonakalo omkhulu? Ayikho indlela yokufaka umucu wokuhlola noma isithombe esilahlekile esibukweni? Izikhungo zensiza kuphela ezibhekana nezinkinga ezinjalo. Ngaphezu kwalokho, onke kufanele anamathiselwe esitolo lapho ukuthengwa kwenziwa khona.
Ngokuvamile, la madivaysi awavamile ukwehluleka. Kepha ukuze ungangeni enkingeni, kufanelekile ukubuka leyo divayisi ngokushesha, ngesikhathi sokuthenga. Udinga ukubheka ukuthi inquma kanjani amazinga kashukela. Hlola ukunemba kwayo kanye nokusebenza kwayo yonke imisebenzi. Lokhu kungasusa izinkinga eziningi ngokuzayo. Ngakho-ke, ungavilili futhi uhlole ucingo ngaphandle kokushiya irejista yemali. Ngempela, kwezinye izimo kulula ukuthenga i-glucometer entsha kunokuyilungisa.
Ukulinganisa ushukela nge-glucometer
Ushukela ulinganiswa kanjani ne-glucometer? Le yinqubo elula kakhulu, ikakhulukazi kulabo bantu abaqonda imishini yale divayisi. Ngokuvamile, konke kwenziwa kalula. Mane ubhoboze umunwe wakho (ingalo noma ihlombe) bese ufaka igazi emhlolweni wokuhlola.
Imizuzwana emi-5 ukuya kwengama-20 kanye nomphumela uzokhonjiswa kukhonjiso lwedivayisi. Izibalo ezitholakele ziyi-glucose egazini. Uma inani lidlula inani elivumelekile noma okuphambene nalokho ngaphansi kwalo, idivaysi ikhipha isinali lomsindo nedatha ephathelene nale nkinga ivela esibukweni. Ngokwemvelo, umuntu kufanele azi ukuthi isilinganiselo soshukela siyini kuye. Ngoba izimo zisahlukile.
Akukho lutho olumangalisayo ngalokhu. Ukufunda ukunquma izinga lakho loshukela kulula. Okokuqala, kukhona amamaki akhethekile esibukweni, futhi okwesibili, idivayisi ngokwayo izokwazisa uma kukhona okungahambi kahle. Ngakho-ke, akunasizathu sokukhathazeka. Konke kwenziwa kalula. Kunoma ikuphi, idivaysi izobika izinkinga futhi ikutshele ukuthi uyifaka nini i-insulin.
Imigomo yokusebenza kwama-glucometer
I-glucometer iyithuluzi lokuthola izinga le-glucose egazini. Namuhla, ama-glucometer enzelwe ukusetshenziswa kwasekhaya asabalele. Lawa ngamadivayisi acwebile asiza ukugcina ukunxephezela okuhle kubantu abanesifo sikashukela.
Imakethi yemithi inamakhulu amamitha egazi kashukela ahlukahlukene akhiqizwa yizinkampani ezahlukahlukene. Onke lamamitha kashukela egazi afana komunye nomunye kulokho:
Zihlangene, zincanyana ngosayizi futhi zilula ngesisindo. Lawa ma-glucometer alungele ukusebenziselwa ukukala amazinga kashukela hhayi ekhaya kuphela, kodwa nasemgwaqweni, esikoleni, emsebenzini,
Esikhathini esifushane (ukusuka kumasekhondi ama-5 kuye kwangama-20-30), imitha ithatha isilinganiso futhi ikhombisa umphumela wokulinganisa,
Ubuningi bama-glucometer wokuhlaziya kudinga imicu yokuhlola, engadliwayo,
Cishe wonke ama-glucometer anememori eyakhelwe ngaphakathi futhi akuvumela ukuthi ubuke imiphumela yokulinganisa edlule. Imvamisa kukhonjiswa isikhathi nosuku ngqo lokulinganisa,
Ama-glucometer amaningi anikeza amandla okudlulisa imininingwane egciniwe kwikhompyutha noma kwi-smartphone. Lokhu kusiza ukubona ngokucace kakhudlwana izinga lesinxephezelo, ukuhlola ukwelashwa okuqhubekayo nokususa amaphutha.
Kepha kunamaphuzu athile ahlukanisa ama-glucometer ukusuka kwelinye. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, elinye lamaphuzu amakhulu elihlukanisa ama-glucometer ngumgomo wokusebenza noma umgomo wokulinganisa.
Kunemigomo emibili eyinhloko yama-glucometer ahlaselayo. Imitha ye-glucose ehlaselayo iyithuluzi elidinga ukwehla kwegazi ukwenza uhlaziyo. Izinyathelo zemitha kashukela kashukela angahlaseli ngaphandle kwezikhonkwane.
Cishe ama-99% ama-glucometer asetshenzisiwe ayakhanga. Ngoba ziyehluka ngezilinganiso ezinembe kakhudlwana.
Azikakabikho amamitha kashukela egazi angahlaseli emakethe, yize kusanda kumenyezelwa ukwakhiwa kwamamitha kashukela egazi angahlaseli, kepha kuze kube manje akukafiki lapho kwethulwa ngokusemthethweni imakethe, njengoba ama-glucometer awadlulanga ekuhlolweni komtholampilo, noma izindleko zawo ziphezulu kakhulu, futhi ikhwalithi nenqubo yokulinganisa akuyona neze into ehlaselayo.
Ngakho-ke, ama-glucometer ahlaselayo asebenza ezimisweni ezimbili:
Isimiso se-Photometric noma se-photoelectric.
Isimiso se-photometric se-glucometer ukuthi, ngokuya ngezinga le-glucose, umbala wezinguquko ezi-reagent, ezisetshenziswa endaweni ebucayi bomugqa wokuhlola. Ngenxa yokushintshwa kobukhulu bokubukeka kwalesi reagent, okunqunywa ngohlelo lwe-gluceter ye-optical, izinga le-glucose linqunywa.
Isilinganiso sokulinganisa se-photometric asilungile ngokuphelele. Ukuhlaziywa kuthonywa yizici eziningi eziphambukisa imiphumela. Ama-Glucometer asebenza ngokuya ngomgomo we-photometric anamaphutha amakhulu wokulinganisa.
Isilinganiso sokulinganisa se-photometric sine-glucometer ikakhulu "yesizukulwane esidala".
Isimiso sokulinganisa se-electrochemical sisuselwa eqinisweni lokuthi kusetshenziswa i-reagent ekhethekile emkhakheni obucayi bomugqa wokuhlola. Lapho ushukela oqukethwe kudonsi legazi uxhumana nale reagent, kwenzeka okuthile okuholela ekuqongeleleni amandla kagesi. I-glucometer ngamandla yalokhu okunamandla kunquma izinga le-glucose esegazini okwamanje.
Indlela ye-electrochemical inembe ngokwedlulele, iphutha emacomeni amancane kangaka lincane. Iningi lamamitha weshukela egazi namuhla asebenza ngokomgomo we-electrochemical.
I-coulometry ingabizwa ngokuthi okubhalwe phansi kwesimiso se-elekthronikhi se-glucometer. Le ndlela yokusebenza isuselwa ekulinganiseni inani eliphelele elikhishwa ngesikhathi sokuhlolwa. Iningi lama-glucometer okusetshenziswa kwasekhaya lisebenza kule mfundo.
Ama-glucmeter asebenza kumgomo we-coulometry adinga inani elincane legazi ukuze lihlaziywe.
Ama-glucometer angahlaseli asebenza ngokuya ngomgomo we-spectrometric, okungukuthi, lawo awadingi ukwehla kwegazi ukuze kuhlaziywe.
Umnyombo womsebenzi wama-glucometer anjalo ukuthi lapho usebenza ngesisekelo se-laser, ama-glucometer angasebenzi asebenzayo ahlukanisa ubukhulu be-glucose kusuka kwezinye i-spectra futhi alinganise izinga lawo.
Kuze kube manje, kukhona amamitha eglucose egazi angahlaseli kangako, kepha awasetshenziswa kakhulu. Lawa amamitha anokunemba okuphansi, enza amaphutha amaningi angaholela ezinkingeni ezinkulu.
Isimiso se-spectrometric sokulinganisa amazinga kashukela asasebenza namanje.
Uyothenga kuphi futhi uyini izindleko eziphakathi?
Ithuluzi eliqondile futhi eliphakeme lokuhlonza lithengwa esitolo esikhethekile.
Asikucebisi ukuthi uthenge nge-Intanethi, ngoba akunakwenzeka ukuthi uhlole amadivayisi anjalo ngaphambi kwesikhathi.
Ngaphambi kokuthenga amadivaysi esitolo, kufanele uwahlole khona lapho, futhi udinga ukwenza isivivinyo cishe kathathu, bese uqhathanisa imininingwane nenye nenye. Uma iphutha lingaphezulu kuka-5% (umkhawulo we-10%), ungathenga ngokuphepha i-glucometer.
Kungcono ukuhlola eminye imisebenzi yedivayisi ngqo endaweni oyithengile.
Kufanele unake izesekeli. Imichilo yokuhlola kufanele ilungele impilo yeshalofu futhi igcinwe ezitsheni ezivalwe.
Lapho ukhetha amadivaysi asebekhulile, kungcono ukuthenga amamodeli akulula kakhulu ukusebenzisa ngaphandle kokufaka ikhodi, ngesikrini esikhulu (ukuze izinkomba zibonakale ngokucacile) kanye nokukhanya okuzenzakalelayo kwasemuva. Kubantu asebekhulile, imodeli ye-glucometer ebizwa nge- "Vehicle Circuit" noma "Ascensia Entrust" ilungile - ayinakho ukufaka amakhodi, kulula ukuyisebenzisa, inika umphumela onembile.
Uma uthenga i-glucometer, kudingeka unganaki kuphela kuzindleko zedivayisi uqobo, kodwa futhi nentengo yokudla. Idivayisi ngokwayo ithengwa kanye, futhi kuyodingeka uthenge imichilo njalo. Kwezigaba ezithile zabantu (kubantu abakhubazekile ngenxa yesifo sikashukela), amadivayisi ngentengo encishisiwe athengiswa emakhemisi kamasipala.
Kwesinye isikhathi abanye abakhiqizi benza ukukhushulwa: lapho bethenga amaphakethe okuhlola amaningana, banikeza insiza yamahhala noma bashintshe imitha yakudala ibe ukuguqulwa okusha.Imodeli eshibhile njengamanje ibiza ama-ruble ayi-1,500-2 000. Ama-glucometer aseRussia anentengo enjalo, athembekile futhi kulula ukuyisebenzisa. Akusikhona ukuthi amanani aphansi ngaso sonke isikhathi abubufakazi bekhwalithi emnyama yedivayisi. Ezinye izinketho zokungenisa nazo azibizi: 2-2,5 izinkulungwane zama-ruble.
Uma imali ivuma, ungathenga amadivayisi athuthukile aseMelika naseJapan anezici ezingezekile. Ama-glucometer anjalo alinganisa izinga le-glucose, cholesterol, triglycerides nezinye izinkomba (izindleko - cishe ama-ruble ayizinkulungwane eziyishumi).